Waxa aan uga mahadceliyo xog-ururintan ayaa diiradda saareysa hagaajinta-istiraatiijiyadda suuqgeynta dijitaalka ah. At Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada ee bishaan, tani waa tan saxda ah ee aan ku bixin doono aragti iyo istiraatiijiyad. Suuqleyda ayaa si aad ah diirada u saaray TOFU (dusha sare ee masaafada) oo ay tabayaan inta hogaamiye ee dhacaya ama aan badalin maxaa yeelay istiraatiijiyaddu ma bartilmaameedsanayan mana fiicna.
Iska dhig inaad tahay rajo aad booqaneyso xaaladaada ugu dambeysay ee cusbooneysiinta, tweet-ka, ama boostada blog-ka… aaway waddada loogu beddelayo? Aaway turunturooyinkii? Miyaad ku cabiraysaa dhibic kasta oo wadada ah si aad u aragto halka ay sicirka dhicintu ka kordhayaan? Haddii kale, waxaad u baahan tahay inaad ahaato.